Mumwe weshamwari dzangu munhurume akandiudza kuti iye kamwe yomusi musikana akaoneka akadhakwa pazuva rokutanga pamusi uye akaita kukurutsai zvose pamusoro pake! Kunyange Zvinofadza handina kumboita kuti ndine chokwadi tose aiva misi vakanga chete pachena ipa, apo munhu akaita chinhu zvachose kukodzera uye iwe chete vakashuva pasi yaizozarura uye kumedza iwe wose. Uye ndine runako chokwadi tose anazvo kwedu kwakanaka mugove chokunzi akadzima pakupedzisira miniti uye kunyange zvichida kuitwa akamira. Plus isu Makanzwa zvose chinokatyamadza nyaya yokutanga misi kuenda zvakaipa. Saka chii chakakanganisika naye pezviitiko izvi uye sei zvaizodziviswa. Zvose anoburuka mashoko maduku maviri 'kufambidzana nokuzvibata'.
Chii kufambidzana nokuzvibata? Zvakanaka Ndinofunga sezvamakaudzwa kutaridza dzisina mirayiridzo kubvumira kudanana ruzivo kuenda zvakanaka uye kunakidza vanhu vose vanobatanidzwa. Chokwadi tinogona kumbobvira kudzora chii mumwe munhu anoita, saka tinogona chete kusarudza kuva mutoro pachedu maitiro edu, uye ndinotenda kuti kana isu ukasarudza kubata mumwe munhu zvakanaka uye rukudzo kufambidzana nokuzvibata ipapo tichava zvakawanda zvinonakidza uye kudzoreka ruzivo kudoma isu. Plus vane mitemo yokuzvibata zvedu kungabatsira kutichengetedza.
Kudanana nokuzvibata zvingasanganisira zvinhu zvakafanana kana kudana, kazhinji sei iwe shoko mumwe, kana iwe kupindura ose mashoko uye runhare, timings uye nokunonoka nokuda misi, chii ukapfeka, chii iwe kukurukura pamusoro zuva rako, kana kuwana mumuviri, asi zvikuru kukosha sei iwe kurapa mumwe munhu uye kuti iwe vanotarisira kubatwa. Sezvaunoona dzirimo zvikuru siyana zvinoumba uye saizvozvo kunogona kuva hwavairarama uye dzinovhiringidza. Plus uchaona kuti vanhu vane vemarudzi ose pfungwa dzakasiyana pane uye haisi zvinogamuchirika maitiro kana totaura nezvokudanana, uye saka chinhu chakanakisisa kuita kusika pachako yakatarwa kwenyu mirayiridzo izvo vanoshandira iwe, woomerera kwavari. Kamwe iwe chaizvoizvo kubuda imomo uye kufambidzana nomumwe munhu zvaunogona pane imwe nguva mugove Mirayiridzo yenyu navo kana zvakadaro sarudza, uye kurukurai kuti nechokwadi muri vaviri vafare uye vanofadza sei kuti kudanana nomumwe zvakaenzana. Izvi zvinosanganisira zvachose kutendeseka uye mumwe pamwero kukura kubva kuvanhu. Ndinotenda kuti kana vanhu vakaita izvi kakawanda zvikuru kurwadziwa kwaizoita kuregwa.
Chokutanga zvazvo, nokucherechedza kufambidzana nokuzvibata ndechenyu. Kana tinozvibata nenzira tinonzwa zvakanaka pamusoro tinotanga uchibvumira isu redu tizviremekedze uye nokuzviremekedza kukura.
Somuenzaniso unogona kusarudza kuti nounyoro kuti munhu iwe wafambidzana kamwe kuziva kana iwe hausi kuvaona zvakare, kana ungasarudza kuti ichi hachisi zvakakodzera. Kana uri mukadzi ungasarudza kuti hamuna kuita zvebonde yokutanga pamusi nokuti nezvaunokwanisa nani kumirira kusvikira uchiziva munhu nani. Kana unogona manzwiro akasimba chaizvo panyaya kuchengetwa tichimirira yemichindwe kana pamusoro mashoko kuitwa vakadzoka. Ava raizoparadzwa zvose pasi 'kufambidzana nokuzvibata'.
Heano mamwe mazano akanaka mureza kuti vanhu vakawanda vanosarudza kutevera sechikamu kufambidzana nokuzvibata:
Iva nenguva yemichindwe
Regai kumira munhu rekupedzisira miniti
Usaora zvechokwadi akanwa musi wokutanga
Regai kupedza usiku hwose kutaura Eks (n'ai)
Pfeka chinhu chakakodzera nokuda musi yauri kuenda mberi
Havangoerekani vapiwa kutarisira pabonde musi wokutanga
Kutaura zvazviri, vanhu vakawanda vaizova vanongomuti pamusoro tsika dzakanaka. Zvisinei vamwe vaduku nezvehukorokodzwa kufambidzana nokuzvibata kunogona kuva munhu pfumbu nzvimbo. Saka tora nguva here kufunga imwe nharaunda zvokufambidzana uye vanosarudza mitemo yenyu uye nhungamiro nechimwe. Unogona kuita senhungamiro zvausinganzwi- zuva varume kumira iwe rekupedzisira miniti, kana kuti imi regai zuva vakadzi vane chaizvo kunonoka. Unogona kusarudza zvisasakare Mini pamipendero musi kana uri mukadzi nokuti uchida kupa kupfuura classy pfungwa. Mirayiridzo iyi achava sezvo akasiyana sezvo imi muri uye chinhu chakakosha kuwana pachena pane zvinhu vakasununguka kwauri uye chii hakubvumirwi kwauri pachako.
Saka sei imi kubata kana mumwe anoita chinhu rausingadi? Unofunga sei apo mumwe munhu achaputsa mumwe mitemo yenyu? Sezvambotaurwa tisati hatigoni kudzora sei mumwe munhu achiita kana tingazodirei. Saka zviri pasi zvaunofanira vanobvuma uye kupi muchachera mutsetse. Somuenzaniso kana mumwe Mirayiridzo yenyu kuti haudi ichengetwe akamirira zuva, uye uine munhu kudoka, kwenyu pfungwa kudanwa wokutanga kuti vazive manzwiro aunoita pamusoro ichi. Unogona kuita izvi isiri mhosva, rakananga zvamarudzi nokungoramba kugoverana manzwiro aunoita uye kuti hazvisi chinhu uchida ari kudanana ukama. Zvisinei zvakadini kana ivo kakawanda vayambuke wako mutsetse? Zvakanaka unofanira kusarudza sei akasimba kuti mutsetse uri kwauri. Kana zvechokwadi akakugumbura uye haugoni kushivirira maitiro zvino munhu nyore haringavi zvakakodzera zvakanaka iwe. Mushure waita akagoverana sei uchinzwa kana vachiri kuzviita uchava kana vanofanira kuuzorodza aende vachifara uye kunatsurudza nhungamiro zvenyu, kana uchada kuti vaende. Ndiwo sei imi kutanga kuvimba iwe pachako miganhu.
Cherechedza kuti huru chikamu, nyaya ino yose ini akataura 'Mirayiridzo' pane 'mitemo'. Izvi imhaka yokuti ndinofunga zvakakosha kuti vamwe kuchinja pamwe pachako tichitarisa pokuedza uye achiona chii anonzwa OK kwauri chinyiko zvachose NOT zvinogamuchirika. Sezvaunokura uye kuchinja munhu saizvozvowo nesimba pfungwa wako nezvokudanana. Nguva dzose kuchinja, Zvisinei kamwe makaita zvakanaka akakukodzera chero nguva yakapiwa Ini hunoratidza vachiomerera rwenyu chemuganhu kufambidzana nokuzvibata. Kana chatinomedura Mirayiridzo kwedu izvozvo nguva dzose zvinodzoka kwatiri kuruma.